ဧရာဝတီ| September 22, 2012 | Hits:8,905
| | ပေါ်တာဆွဲတာ၊ အရပ်သားတွေကို နှိပ်စက်တာလို ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ် နာမည်ပျက်လာခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ ချီ ကြာခဲ့ပါပြီ
ပွင့်လင်းစ မြန်မာပြည်နှင့် ဂျပန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးစစ်အာဏာသိမ်းမှု ၂၆ နှစ်ပြည့်ချိန်အထိ နိုင်ငံရေးအာဏာ စစ်တပ် ချုပ်ကိုင်ထားဆဲအစိုးရ ခေါင်းဆောင်နေရာ စစ်ခေါင်းဆောင်တို့ အတွက်သာမြန်မာကို လုံခြုံရေး အကူအညီ ကန့်သတ်မည့် အမေရိကန် ဥပဒေကြမ်း သမ္မတရုံး ဝေဖန်ISIS စစ်သွေးကြွများကို ချေမှုန်းမည်ဟု အိုဘားမား ကတိပေး
naymyo September 22, 2012 - 10:34 pm very good article and fair for people .
Reply myo chit September 22, 2012 - 11:07 pm No sense!!! Reply Lisukachin September 23, 2012 - 12:14 am Hi, Mr. Charlie Campbell, where had you been when tens of thousands of Kachin Minority Lisu people fled out of Kachin state into Momeik and Mogok regions during the last few decades? Where were the eyes of your watchdogs when Lisu people, the bread-winners of KIA were brutally killed by K.I.A themselves? How many bridges did Myanmar people destroyed during the British rules? And do you know how many bridges have been destroyed by K.I.A and that don’t you know that these rebels valueahuman being better than their idols, so-called Manau Pillars? Please give meafew tens of thousands of dollars so that my dream for publication of LIFE IN KACHIN STATE will come true. I don’t claim that all Myanmar soldiers are innocent, good guys. You should find out first to know who have eaten human fles in Myanmar. Reply Banyar Aung September 23, 2012 - 12:38 pm အနှစ် ၆၀ ကျော် ရှေ့တန်းထွက်ပြီး ဒါးမြတိုက်လုယက်လာတာ အရိုးစွဲနေပြီ၊ နောက်တန်းမှာနေရင် ရတဲ့လစာနဲ့ မိသားစုစားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေဘူး၊ အဲဒါကြောင့် စစ်ပွဲရပ်စဲလို့မဖြစ်တာ၊ စစ်ပွဲရပ်လိုက်ရင် ရဲဘော်တွေ ငတ်ပြီ၊ (အရာရှိတွေမပါ) Reply win zaw.79 September 25, 2012 - 10:07 am စစ်တပ်ကိုပဲ လူမိုက်လိုပြောနေကြတယ်။ KIA မှအစ ကျန်တဲ့ သူပုန်အားလုံး လူ့အခွင်းရေးတွေချိုးဖောက်တာ ကို ကျတော့ ဘယ်သူမှမပြောကြဘူးလား။ငါတို့ နယ်စပ်မှာ နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံး သူပုန်တွေမကောင်းတာအကုန်သိ တယ်။အဲ့ဒီတော့ ပြည်သူတွေအတွက်ပဲ စဉ်းစားတဲ့လူလိုတယ်။
Reply khun banyarzaw September 29, 2012 - 9:43 am အခုစစ်ပွဲဖြစ်နေတာ စစ်တပ်ရော၊ ကေအိုင်အေ စစ်ခေါင်းတွေက မရိုးသားကြလို့ပါ။